Soo dejisan Eset 8.0.319.0 Smart Security iyo Nod32 – Vessoft
Soo dejisan Eset
Eset – antivirus ah oo caan ah si ay u ilaaliyaan xogta aad ka dhanka ah network iyo hanjabaad maxaliga ah. software The baaritaanku your computer, waayo, waxyaalaha khatarta ah, tiraa fayrusyada ogaado iyo waxay bixisaa ammaanka nidaamka. Eset sir iyo difaacaa macluumaadka shakhsiyeed ee user ee ka dhanka ah walax lagu jiro xiriir si shabakadaha Wi-Fi dadweynaha. Eset waa inay awoodaan inay iskaan lifaaqa email ah, lagu ogaan spyware iyo xannibi goobaha web ka shakiyaan. Sidoo kale Eset ka kooban module gaar ah oo awood si loo ogaado meesha uu computer Khasaaray.
Habka iskaanka Modern
Antiphishing, antispam iyo basaasnimo anti
updates joogtada ah ee database virus
Comments on Eset:
Eset Software la xiriira:
العربية, English, Français, Español... Spybot - Search iyo Destroy 2.4.40.0
English, Français, Deutsch, Italiano... Comodo 8.2.0.4792 AntiVirus, Internet iyo Firewall
Українська, Français, Español, Deutsch... Genymotion 2.6.0